Nataon’ny artista ho lasitra hisiam-piovana nandritra ity 2015 ity izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Desambra 2015 7:38 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Català, русский, Deutsch, 日本語, Ελληνικά, English
Sary avy amin'i Tobias Abel. CC BY-ND 2.0
Fiteny afa-miako manerana ny firenena sy kolontsaina maro ny zavakanto, ary avy amin'izany, nandray ny borosy fandokoana sy ny fakantsariny hiasa firaisankiana, hanohitra ary hampieritreritra ry zareo artista nandritra ny taona 2015.
Nitondra anao nitety izao tontolo izao ny mpanoratra tato amin'ny Global Voices tamin'ity taona ity nitatitra ireo tantara manome aingam-panahy hamoron-javatra. Koa satria efa mihamanatona ny taona vaovao, dia andao hitamberina amin'ny 16 amin'izy ireny isika.
Peròviana tanora iray nahazo ny fon'ny olona tato amin'ny aterineto [mg] tamin'ireo fampisehoana hira fanta-daza nadika ho amin'ny tenin-teratany Quechua.
Tamim-pientanentanam-pifaliana [mg] no nanamboaran'ny Ejipsiana indray ny “hiram-pirenena” ISIS ho lasa fandihizana hanesoesoana ilay vondrona mitam-piadiana maherisetra.
Tao Kroasia, “nomen'ny” [mg] mpikaroka anaram-behivavy nanana anjara toerana teo amin'ny tantara ny lalana miisa 150 eo ho eo tamin'ny alalan'ny fampiasana taratasy mirefy A4 na A5 ho fampahatsiarovana na dia nifidy ny filohany vehivavy voalohany aza ny firenena, mbola maro no tokony hovitaina eo amin'ny resaka zon'ny vehivavy.
Anaran-dalana vaovao nomena an'i Vesna Parun, poeta Kroaty.
Loharano: Marinella Matejcic
Lasa lasitra fanaovana fitakiana ara-tsosialy sy politika ny valopy fanao isaky ny Taombaovao manara-bolana ao Hong Kong. Misy andiam-balopy manasongadina sarina avana [mg] ho fanohanana ny fankatoavana ny LGBT, raha misy indray ny andiany hafa nampidirana elo mavo [mg] ho fanomezam-boninahitra ilay lazaina ho “Revolisionan'ny elo” nanaovana fihetsiketsehana nitakiana tamin'ny governemantan'i Beijing sy Hong Kong am-bolana maro ny fahafahan'ny olom-pirenena manendry kandidà hofidiana ho filoha faratampon'ny tanàna.
Andiam-balopy mena nahitana elo mavo nozarain'i Um dot dot dot.
Lasa fitaovana ny amboradara ho an'ny vehivavy ao Brezila hanehoany ny loniloniny amin'ny herisetra ataon'ny orinasan'angovo mitady hanambaka ireo fiarahamonina (fokonolona) ao an-toerana amin'ny harena voajanahary ananan'izy ireo.
Zavakanto nataon'ilay Breziliana mpanao sariitatra Vitor ho an'ny tetikasa arpilleras. Sary: Arpilleras: Bordando a resistência/Facebook.
Tavela teo amin'ny fampahafatarana fotsiny ny voina nateraky ny ady ao Yemen ary mihamitombo ny lonilony eo amin'ny mpiray tanindrazana. Nampiasa ny talentany [mg] hamoron-javatra mampiroborobo ny hafa-piraisankina ao anatin'izany fotoana mamaivay izany ny Yemenita artista.
Kanto an-drindrina ao Sana'a ahitana ny sainam-pirenen'i Yemen avy amin'ny vakim-pitaratry ny trano nodarohan'ny vondrona tarihin'i Arabia Saodita an'habakabaka.
Mbola teo am-pitsimponana ny sombim-piainany ny Gazaita taorian'ny fanafihana nandritra ny asara [andro mafana] 2014 nataon'i Isiraely izay nahafatesana Palesitinianina mihoatra ny 2000. Ny artista avy amin'ny Fanjakana Mitambatra UK Kerry Beall no nanapa-kevitra handoko ny sarintavan'ireo namoy ny ainy.
Sarintavan'ireo lasibatra tao Gaza nolokoin'i Kerry Beall
Sary an-drindrina goavana dia goavana nolokoina tamin'ny lasitra fandokoana [mg] ahitana trano 200 tao Pachuca, Hidalgo, Meksika, no nahafahana namoronana asa, nampihenana ny herisetran-jatovo ary nampidirana ny fanahy iraisan'ny fiarahamonina ao an-tanàna mitolona isan'andro.
Las Palmitas sy ny “kanto an-drindrina goavana dia goavana” eo amin'ny dingana famaranana. Sary nalaina nahazoana alalana avy amin'ny pejy Facebook fiarahana Germen Crew.
9. Amerika Latinina sy Italia
Na dia misy ranomasimbe aza manasaraka an'i Amerika Latinina amin'i Eoropa, toerana andosiran'ireo andiam-pitsoa-ponenana maro dia maro, dia nisy fampirantiana iray tao Italia [mg] nanasongadina ny sangan'asan'ireo artista Amerikana Latinina mampiroborobo ny fangorahana ho an'ireo mpialokaloka sy mpifindramonina.
Fampirantiana ireo kanto miresaka mpifindramonina. Sary nahazoana alalana. Sary nampindramin'i Progetto 7LUNE.
Ny sarimihetsika “Ady Gasy” nandrakitra ny karataky ny vahoakan'i Madagasikara [mg] hiadiana amin'ny fahantrana, hanoanana ary tondra-drano amin'ny alalan'ny famadihana ny kodiarana tonta ho lasa kapakapa sy ny kapoaka foana ho lasa kilalao.
Edwin Koo, mpakasary no nanapika sary ny sehatra mpitranga isan'andro amin'ny fitaingenana [mg] fitateram-bahoaka hipoka dia hipoka ao Singapaoro:
…Sarim-pifindrana tsy natao ho fankaherezan-tena, tsy fiadian'ny fanaovan-dratsy, ary tsy fitaovana fimenomenonana eo noho eo. Sarintava iraisan'ny fiaraha-monina iainantsika ankehitriny ireo.
Sary avy amin'i Edwin Koo. Nahazoana alalana
Tao Bangladesh, nandrehitra fankahalana tonga hatramin'ny fahafatesan'ireo lazaina ho tsy mpino an'Andriamanitra ireo eksitiremista ara-pivavahana. Blaogera lahika sy mpanatanteraky ny trano famoahana (pirinty) efatra no maty nisy namono tamin'ny taona 2015 fotsiny. Na dia lalaina ao amin'ny lalampanorenana aza ny fahalalahana haneho hevitra ary fanjakana lahika i Bangladesh, dia kely ny hetsika ataon'ny governemanta hanakiviana [mg] ireny fanafihana ireny na itondrana ny mpamono olona eny amin'ny fitsarana.
Eo anatrehan'izany fivoaran-draharaha manafintohina izany, dia nataon'ny Bengalis ao Bangladesh ho fotoana manokana hiadiana amin'ny tsindrim-piarahamonina sy ny fandraisana an-tendrony ara-pivavahana manana ny lohahevitra manao hoe “Onek Alo Jaalte Hobe Moner Ondhokare” (mandrehitra hazavana maro anatin'ny haizin'ny fo) ny fankalazan'izy ireo ny Taombaovao marevaky ny loko isankarazany [mg].
Mpakasary iray ao Orogoay no nampifantoka ny asany amin'izay tian'ny sasany ao amin'ny firenena hohadinoina aza — dia ireo nanjavona nandritra ny didijadona. “Zavatra iray mety ilain'ny sasany ny fahatsiarovana, saingy mety ho zavatra tian'ny hafa hotsipahana ihany koa,” hoy izy.
Iray amin'ny sarin'i Miradas Ausentes tao Montevideo. Saripika: Juan Urruzola. Nahazoana alalana
Artista Filipino Federico Boyd Sulapas Dominguez no nandoko ny tolona [mg] ataon'ny vahoaka teratany ao Filipina hanoherana ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany mitondra faharavàna, ny hetraketraky ny fampandrosoana ary ny fanerana hamenoana miaramila ny tanàna
Ankilan'ny fanehoana ny vokadratsin'ny fametrahana miaramila, dia asehon'ny sary koa ny fomba tsy an-drariny fanavakavahan'ny lalàna napetraky ny governemanta an'ireo vondrom-piarahamonina ara-poko ao Filipina. Hosodokon'i Federico Boyd Sulapas Dominguez. Naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana
Miatrika fiampangana maro ho mpampisara-bazana ilay mpanao sariitatra politika Zulkiflee Sm Anwar Ulhaque, fanta-daza kokoa ho Zunar ao Malayzia. Na dia miatrika vesa-piampangana maro aza ilay Malayziana mpanao sariitatra dia nampanantena [mg] ny hampiasa hatrany ny peniny hitsikerana ny kolikolin'ny governemanta, ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ary ny fihoaram-pahefana.:
Namorona takelaka fakana tahaka maneso [mg] ireo hafatra fankahalana vahiny ny Hongroà amin'ny fampiasana loko sy Photoshop.
“Afisy Orizinaly: “Raha mankaty Hongria ianao, tsy maintsy mankatò ny lalànanay!”
Niova ho: “Raha mankaty amin'ny firenen'ny fanihy ianao, tsy maintsy mankatò ny lalànanay!” (ho fahatsiarovana an'i Hunter S. Thompson “Fear and Loathing in Las Vegas”[tahotra sy rikoriko tany Las Vegas])